Umkhiqizi kanye neFektri Elikhulu Lethusi | Beihai
ICopper Foam isetshenziswe kabanzi njengokulungiswa kwezinto ezithwala ibhethri, i-electrode substrate yebhethri ye-lithium ion noma uphethiloli, iseli-catalyst carrier nezinto zokuvikela ugesi. Ikakhulukazi igwebu lethusi yinto eyisisekelo esetshenziswa njenge-electrode yebhethri, enezinzuzo ezithile ezisobala.
Igwebu lethusi lingasetshenziswa njenge-substrate ye-electrode
Igwebu lethusi linomsebenzi omuhle wokuqhuba ukushisa nogesi, ongasetshenziswa njenge-substrate ye-electrode yebhethri ye-lithium ion noma iseli likaphethiloli.
ICopper Foam isetshenziswe kabanzi njengokulungiswa kwezinto ezithwala ibhethri, i-electrode substrate yebhethri ye-lithium ion noma uphethiloli, isithwali se-cellcatalyst nezinto zokuvikela i-electromagnetic. Ikakhulukazi igwebu lethusi yinto eyisisekelo esetshenziswa njenge-electrode yebhethri, enezinzuzo ezithile ezisobala.
I-1) igwebu lethusi linezinto ezinhle kakhulu ezishisayo, lingasetshenziswa kakhulu ezintweni zezimoto / zikagesi nezikagesi zemisebe yokuhambisa ukushisa.
2) igwebu lethusi ngenxa yokusebenza kwalo okuhle kakhulu kagesi, ibhethri layo le-nickel-zinc kanye nokusetshenziswa kwezinto ze-electrode ze-capacitor ka-double-capacitor kagesi nakho kuthintekile ukunakwa komkhakha.
I-3) ngenxa yezici zesakhiwo se-foam yethusi futhi ayinabungozi kuzimpawu zomzimba womuntu, izinto zokuhlunga zethusi le-foam ngumuthi omuhle kakhulu wokuhlunga nokuhlanza amanzi.
Ishidi legwebu lethusi
5PPI kuya ku-80PPI
0.25g / m3 kuya ku-1.00g / cm3
90% kuya ku-98%
5mm ukuze 30mm
1. IChemical Engineering Field: i-catalyst kanye nesiphathi sayo, isihlungi esiphakathi, esimaphakathi ngesihlukanisi.
2. Industrial Thermal Engineering: damping materials, high-efficiency thermal conductive materials, industrial filtration materials, high-grade materials zokuhlobisa.
Izinto Ezisebenzayo: Isileli, ukumuncwa kwe-Vibration, i-Buffer shielding electromagnetic, ubuchwepheshe be-stealth, i-flame retardant, i-thermal insulation, njll.
4. Ibhethri ye-Electrode Material: Isetshenziswa ezintweni zohlaka lwe-electrode yebhethri njenge-nickel-zinc, ibhethri le-nickel-hydrogen kanye nogesi ungqimba ophindwe kabili.
5. Esilula: Izimoto ezingasindi, isisindo esilula semikhumbi, nezakhiwo ezilula.
6. Izinto zokubhafa: Idivayisi yokunciphisa ingcindezi yokulinganisa ingcindezi.
Langaphambilini I-Nickel Foam
Olandelayo: Isihlungi se-Alumina Ceramic Foam
Igwebu Lethusi Lebhethri
Amagwebu Omnyama Wensimbi Omnyama
Ishidi Lethusi Lethusi
Abahlinzeki Bamagwebu Wethusi
Igwebu Elincane Lesethusi